Guur wadareed Iran maalgelisay oo lagu qabtay Muqdisho (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Guur wadareed Iran maalgelisay oo lagu qabtay Muqdisho (Sawirro) * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guur wadareed Iran maalgelisay oo lagu qabtay Muqdisho (Sawirro)
By A warsame on 9th September 2014
Mareeg.com: Dowladda Iran ayaa Muqdisho ka bilowday iney taageerto qaar ka mid ah qoysaska is guursanaya, waxeyna shalay Muqdisho kaalmo lacageed iyo agab guurka ku gudoonsiisay ilaa 20 qoys oo loo qabtay xaflad “Guur Wadareed”.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda dhalinyarada Soomaaliya, Cismaan Maxamed iyo mas’uuliyiin kale ayaa ka qeybgalay maunaasabad lagu guddoonsiinayey lamanayaal Soomaaliyeed agabyadii ay ku aqal gali lahaayeen, taasi oo dhiiri gelin u ah.
Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa dhallinyaro badan oo rag iyo dumar ah, kuwaasoo loo sameeyey guur wadareedka.
Hay’adda Imaam Khumeyni ee dalka Iran ayaa shalay lacago ay ugu talagashay 20- qoys oo dhawaan isguursaday guddoonsiiyay kaalmo lacageed iyo agabyo kale oo ay ugu talagashay inay ku maareeyaan noloshooda, waxaana munaasabad kooban oo arrintaasi ku saabsan ka qeyb galay mas’uuliyiin kale duwan iyo qaar ka mid ah qeybaha bulshada.
Madaxa Hay’adda Imaam Khumeyni ee dalka Iran Cabdi-jaliil ayaa tilmaamay in hay’adda ay ka go’antahay sidii ay gacan uga geysan lahayd dhiiri gelinta dhismaha lamaanayaasha isqaba, isagoo horumar iyo baraare u rajeeyay qoysaska ay maanta agabyada iyo kaalmada lacagta ah ay ku wareejiyeen.
Saciido Cismaan Geeddi oo ka mid ah dadkii ka faa’iideystay kaalmada ayaa ka codsatay ganacsatada iyo hay’adaha kale in ay ku daydaan Hay’adda Imaam Khumeyni, si loo dhiiri geliyo dhalinyarada dooneysa in ay dhistaan mustaqbal wanaagsan.
Safiirka Dowladda Iran ee Soomaaliya ayaa talaabada ku tilmaamay mid guul ah oo ay ku dhiiri gelinayaan qoysaska Soomaaliyeed.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga ee Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Maxamed oo isna goobta hadal ka jeediyay ayaa dhalinyarada ka faa’iideystay kaalmada ay hay’adda Imaam Khumeyni guddoonsiisay ku booriyay in ay ka shaqeeyaan horumarka dalka, isla markaana ay noqdaan kuwa isku tiirsan oo aan noqon kuwa wax ka suga hay’adaha samafalka.
Dalka Iran oo ah Shiico ayaa tartan kula jira dalalka Carabta ee Soomaaliya gargaarka ka bixiya, waxeyna Muqdisho ku leeyihiin safaarad aad loo ilaaliyo. Waxaana la rumeysan yahay iney dalka wadaan afkaarahooda gaarka ah, si la mid ah dalalka kale ee yimid Soomaaliya.